Iindaba-INkokeli yokuHamba. yeEcology kunye nokusiNgqongileyo kweZhengzho kuvavanywe ulawulo olunzulu lokusingqongileyo kwiFangming NewM
Tsalela Us: 0086-18838229829
I-Crystal yokutyala okwenziwe ngobugcisa-kunqabile-kuMhlaba oHlanganisiweyo weCeramic Thermal
Isinyithi esixabisekileyo siyanyibilika
Umzi mveliso we-Metalurgy
INkokeli yokuHamba. yeEcology kunye nokusiNgqongileyo kweZhengzho kuvavanywe ulawulo olunzulu lokusingqongileyo kwiFangming NewM
I-Zhengzhou Fangming Ubushushu obuphezulu I-Ceramic New Material Co, Ltd. izixhobo zokutshiza ngoxinzelelo oluphezulu kunye nezixhobo zokubeka iliso kwi-ultra-low. Ngalesi sixhobo sokubeka esweni, isebe linokuthi libeke iliso kwimeko yemveliso yeworkshop ngexesha elifanelekileyo. Ngomhla ka-Novemba. ye-ecology kunye nokusingqongileyo kwesiXeko saseZhengzhou.
Ngexesha lokuphela konyaka omdala kunye nokuqala konyaka omtsha, imeko ye-COVID-19 yesifo ibhuqe iWuhan, Hubei kunye neChina iphela. Okokugqibela, ukuphela kuka-Epreli 2020, ubhubhane ulawulwe ngokusisiseko kwaye uqoqosho lwesizwe lusendleleni elungileyo. Ngelixa besilwa no bhubhane kwi2020, Fangming NewM ibisoloko inyanzelisa ekuthatheni ukhuselo lokusingqongileyo kunye nokukhuthaza umsebenzi wophuhliso oluhlaza.
Ngenjikalanga ka-Epreli 27th, 2020, inkokheli yokuhamba. ye-ecology kunye nokusingqongileyo kwesiXeko saseZhengzhou yeza kwiFangming NewM ukujonga umsebenzi wolawulo olunzulu lokusingqongileyo. UNksk Zhang Ning, usekela mphathi jikelele we Fangming NewM wayenoxanduva lokwamkela. Iinkokheli zokuhamba. yeEcology kunye neNdalo esingqongileyo yaya kwindibano yokuxubana, ucofa ucweyo kunye nokugaya umzi-mveliso wesityalo kuvavanyo lwesiza, wabuza malunga nomsebenzi wemihla ngemihla wabasebenzi. UNksk. Zhang wazisa izibonelelo kunye nokusetyenziswa kweemveliso zeceramic ezikhethekileyo zeceramic ezizimeleyo eziphuhliswe kwaye zaveliswa yiFangming NewM ngokucacileyo kwigumbi lokuhlangana. Inkokeli ibisazi kakuhle amanyathelo okhuselo lokusingqongileyo athathwe yiFangming Newm, kwaye yancoma ukuba iFangming NewM iyaqhubeka ukomeleza ukuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo yesizwe kunye nezikhokelo kwimiba yokhuselo lokusingqongileyo. Babenethemba lokuba i-Fangming NewM inokukuqonda ngokucacileyo ukubaluleka kwemigaqo-nkqubo yesizwe kukhuseleko lokusingqongileyo kulawulo olunzulu kunye nokuzingisa kulo msebenzi ixesha elide
Ukuseta ngo-Septemba. Uhlobo olutsha lwezinto ezisisiseko ze-nano-ceramic kunye neemveliso njengezinto zesiseko se-zirconia, amandla emveliso ngonyaka ngama-30000tons, kunye nenkampani ehamba phambili yokuvelisa izixhobo ze-zirconia ze-ceramic kunye neemveliso e-China.
Ngolu lawulo, iNewM eFangming iye yaqonda ngokunzulu ukuba akukho siphelo kulawulo lokusingqongileyo. Ngokusekwe kwimeko yangoku yolawulo lokusingqongileyo, kufanele ukuba sihlolisise imigaqo-nkqubo efanelekileyo yesizwe, ngokuqhubekayo sifunde kwaye samkele iindlela zobuchwephesha ezivela kwiiyunithi zabazalwana bephondo nezikamasipala, ngokuqhubekayo siqinisa ulawulo lokusingqongileyo, kwaye sikhuthaza ngamandla uphuhliso loshishino lwezendalo.
Ixesha Post: Apr-30-2020